Kuyini ukungezwani komzimba nomzimba? - GAAPP
Ikhaya>Kuyini ukungezwani komzimba nomzimba?
Kuyini ukungezwani komzimba nomzimba?Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-05-31T11:21:49+02:00
Ukungezwani komzimba nesinye sezifo ezivame kakhulu ezingamahlalakhona. Ukungezwani komzimba nokuphendula okungajwayelekile entweni engenabungozi ebizwa nge-allergen. I-allergen isho into ekhiqiza ukuphendula okunamandla ngendlela engajwayelekile lapho amasosha omzimba elwa nosongo olubonakalayo olungeke lube yingozi emzimbeni, njenge-pollens, ukudla, kanye nezintuli zasendlini. Lokhu kusabela okweqile kubangelwa iphutha lamasosha omzimba. Amasosha omzimba asivikela ekuhlaselweni yizinto zangaphandle eziyingozi ezinjengebhaktheriya noma amagciwane angadala izifo, noma amaseli wawo, njengamaseli wesimila. Kepha kufanele futhi ikwazi ukuvumela ukungena kwezinto ezizuzisayo njengoba izakhi zomzimba zingena ngokudla. Ama-Allergen ayabekezelelwa ngaphandle kwezinkinga ngabantu abangaxabani nabo. Iningi labantu alinazo izinkinga zokuxhumana nezilwane ezifuywayo ezinjengamakati, kepha uma uxabana nazo uqala ukuthimula, uthola ikhala elilumayo neligobayo namehlo abomvu futhi alumayo.
Thola kule webhusayithi imininingwane elandelayo mayelana ne-Allergies: